Izixhobo zokuSebenza ngeGym, Ukomelela kweTreadmill, Izixhobo zokuzivocavoca ngengalo - iBaisheng
Imveliso yeTshati yokuHamba
"Abantu abaphethwe" sisiseko senkcubeko yethu yobumbano. "Inzuzo yokuzibandakanya, ukuvelisa izinto ezintsha, ukuhlonipha uluntu kunye nokusebenza okuqhubekayo" ngumgaqo-siseko wethu weshishini. Siza kuphakamisa ukwenziwa kwezinto kunye nomoya wenene, ukuvelisa ezona mveliso zizixhobo zodidi lokuqala.
Plate Umthwalo we-Hip Abduction BS-D48
0 0 isihlanu Amanqwanqwa amaTeki oMatshini woTshini
I-Lat Pull Down BS-F-1006
Ukujikeleza nge-BS-6521 kwangaphakathi
I-XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD ekhethekileyo ekuphandeni nasekuqhubeni izixhobo zomzimba. I-BS SPORTS ineemali ezizigidi ezingama-3 zeedola, egubungela umhlaba ongaphezulu kwe-10000 yeemayile.
Ubungakanani beshishini le-BS SPORTS bugubungela i-R & D, Imveliso, ukuThengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa yezinto zokwenza umthambo zorhwebo, umthambo wasekhaya kunye nemveliso ezinxulumene noko.Ngaphezulu kwe-70% yeemveliso ezithengiswayo eNyakatho Melika, eMpuma Yurophu, eMbindi Mpuma, eTaiwan, ongKong njl.
NgoJan-10 ukuya ku-2020
Izixhobo zokuzivocavoca onokuzithengela ii-home workouts njengoko i-coronavirus quarantine iyaqhubeka
Ukuseta indawo yokuzivocavoca okugqibeleleyo kuthetha ukuba akusafuneki uhlawulele ubulungu bomzimba okanye umntu oqeqesha abantu. Into oyifunayo sisixhobo esifanelekileyo sokusebenza. Kwaye izixhobo zakho ozikhethayo ziya kwahluka ngokuxhomekeka kwinqanaba lakho lomgangatho kunye neenjongo zomzimba. Ukuzama ukunciphisa umzimba? Unokukhetha ukutshisa iikhalori nge-c ...
Ngomhla wamashumi amathathu anesithandathu ku-30-999
Umdlalo wemidlalo wase China
I-XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., I-LTD izakuya kwi-China Sport Show eShanghai ngoMeyi, 2020 kwaye bazakuya kumboniso wezangaphandle onjengeVietnam, India, njl njl. Ujonge ukuhlangana nawe apho!
UmThengi China umthengisi ekumgangatho ophezulu we-plastiki
Idilesi: Akukho.2 Indlela yeZhengxian, iDolophu yasePaoche, isiXeko sasePizhou, kwiPhondo lase Jiangsu, e China
Inombolo kanomyayi: I-86- (0) 516-66220516